Hiran State - News: Wararkii ugu danbeeyey siyaasada Somaliya
Wararkii ugu danbeeyey siyaasada Somaliya
HS:- Shiikh Shariif oo loogu hanjabay hadii uu dhaqso tagi waayo Garoowe in ay sharci daro noqoneyso xil ka qadistii Farmaajo, halka kooxa Shabaab duulaan ku tagay Puntland.
Dhaq dhaqaaqyo siyaasadeed kii ugu danbeeyey oo ka socda Somaliya iyo ragii ku heshiiyey iney meesha ka tuuraan R/wasaarahii aan waxbo galabsan Farmaajo ayaa waxaa saacadahii ugu danbeyey hareeyey wal wal iyo cabsi ah ineyba si toos ah u waayaan xilalkooda kadib markii si toos ah loogu sheegay hadii uu qabsoomi waayo shirka Garoowe in waxkasta laga soo bilaabayo bilaw min baarlamaan, madaxweyne ilaa gudoomiye baarlamaan taasi oo Shiikh Shariif oo dareemay in gursigan uu dad badan dartiis u laayey ee dhiiga badan ku taatay ee uu isaga ku fadhiyo loo soo dhigtay si deg deg ahne ku gaaray Garoowe.
Laakinse wararka qaarkood waxey sheegayaan in ay howshooda sii wadi doonaan xildhibaanadii uu howl galiyey Shiikh Shariif ee qalqalka ku hayey saaxiibkiis Shariif Hasan. warar kale oo la hubo ayaa sheegaya in R/wasaare C/wali Gaas dowlado badan oo reer Galbeed ah si cad ugu sheegay in cida ka soo horjeeda inuu qabsoomo shirka Garoowe uu yahay madaxweyne Shariif walow uu si xeeladeysan oo ay beesha caalamka fahmi karto ugu shegay R/wasaaruhu.
Marka laga soo tago cadaadiska beesha caalamka waxa dhinac socday hanjabaadyo ka imaanayey 24tii saac ee ugu danbeysay maamulka Puntland oo ku hanjabay iney ka bixi doonaan dowlada Federalka oo ay kalsoonida kala noqon doonaan hadii uu shirkan dhici waayo ugu yaraan maalinta talaada ee soo socota taasi oo ay si deg deg ah xafiiska UNPOS ee laga hago siyaasada Somaliya uu ku dhawaaqo in shirka wadatashiga socon doono 3 maalmood uuna qabsoomi doono maadama uu shirku yahay qandaraas laguna cunayo malaayiin dolar oo ay ka baahan yahiin shacabka Somaliyeed ee jahwareerka lagu hayo.
Si kasta waxaa wali taagan xurguftii Shariif Hasan iyo mudanayasha baarlamanka taasi oo uu horey u abaabulay Shiikh Shariif oo hada lafahiisa u cabsaday. dhinaca kale kooxda mayalka adag ee Shabaab ayaa si weyn ugu diyaar garoobay iney weeraraan Puntland iyagoo sidey sheegteen isku diyaarinaya iney degaanadaasi ka fuliyaan qaraxyo iyo dagaalo qorsheysan maadama sida lagu soo waramayo ay aad uga yaraadeen dagaaladii kaka furnaaa Hiiraan kooxda taasi oo u suuro galineysa iney howlgalo si sahlan uga fuliyaan gobolada dhexe siiba Galgaduud iyo Mudug.
Si kastaba marka la eego qaabka ay TFGdu u shaqeyso oo ah in masuuliyiinta TFGda ay isku hayaan beesha caalamka oo aysan iyagu si Somalinimo ah u wada shaqeyn hadane waxaa la leeyahay jiritaanka TFGda waa maalmo waxeyna waxkasta isbedeli doonaan marka shirka Garoowe uu dhamaado.
Dhacdooyinka ugu xiisaha badan waa in Shiikh shariif ay maamulka Puntland ugu hanjabeen hadii uu hor istaago inuu ka soo qeyb galo shirka Garoowe amaba diido inuu Garoowe yimaado in ay maamulka Puntland ku xiran doonaan qabiilo Somaliyeed iyo deegaano ay qarkood afka ku dhufteen oo uu xasaasiyad ka qabo Shariifka taasi oo wal wal badan ku abuurtay qeybna ka aheyd safarkii maanta u ku tagay magaalada Garoowe. arintan dad badan mar kale ayey maqli doonaan beelaha iyo deegaanada ay mamulka Puntland ku xuuxiyaan Shariifka in aanu carabka ku dhufano hada kuma deg degeyno waxaanu ku soo qadan doonaa war bixinteena danbe walow ay dad badan fahmi karaan.
Gudtii iyo gabo gabadii waxaa lagu wadaa in Somalida loo qabto shirkii ugu weynaa ee ebed ka dhaca qaarada Yurub iyadoona shirkaas looga hadli doono oo kaliya arimaha dib u heshiisiinta iyo amaanka marka uu ka furmo magaalada London kaasi o ay marti galineyso dowlada Ingiriiska
· admin on December 19 2011 15:04:27 · 0 Comments · 1487 Reads ·
14,579,340 unique visits